Akụkọ - Shanghai Meokon Emume onyinye mmụta mmụta abụọ "Meokon Smart Sensor" mechara zuru oke
Shanghai Meokon Emume onyinye mmụta mmụta "Meokon Smart Sensor" nke 2 dechara n'ụzọ zuru oke
Na Nọvemba 11, 2020, emere mmemme ọzọ kwa afọ "Meokon Smart Sensor Sikolas".
Mmemme MEOKON SENSOR TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO bidoro mmemme a, LTD yana mmemme a bụ ịgba ndị mahadum ume ka ha nwee ọkaibe na ọgụgụ isi ihe ọhụụ. Emere onyinye mmuta akwukwo a na Changshu Institute of Technology dika emume nke abuo "Meokon Smart sensor Scholarship". Delong, Chen bụ onye isi njikwa nke Shanghai Meokon, gara emume ahụ wee kwuo okwu iji bulie ákwà mgbochi ahụ.
Okwu General Manager
Kwuru site na General Manager
Nke ọzọ, ndị isi obodo Shanghai Meokon mere emume inye onyinye maka ndị mahadum mahadum bụ ndị natara akara ugo ahụ ma nye ha asambodo onyinye ahụ; Shanghai Meokon ji talent ọ bụla kpọrọ ihe ma meghee aka ya ịnabata talent ọ bụla nke nwere nrọ ma na-agbasi mbọ ike maka ndụ ya.
Nke a bụ oge nke abụọ na Shanghai Meokon ewepụtara agụmakwụkwọ na mahadum pụtara ìhè ụmụ akwụkwọ ndị isi ha bụ ihe mmetụta. Ebumnuche nke enyere scholarships, n'otu aka, iji gbaa ụmụ akwụkwọ pụtara ìhè ume ịmụ ihe nke ọma wee bụrụ ogidi nke ihe ọhụrụ na mmepe nke ụlọ ọrụ ihe mmetụta ngwa ngwa. N'aka nke ọzọ, ọ na-akwadokwa ma na-agba ume ịzụlite nkà na mahadum. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ nwere olile anya na site na imekọ ihe ọnụ ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọrụ, ọ nwere ike ịmịkọrọ ndị ọzọ ezigbo mma iji mepụta mmepe nke ya. N'ọdịnihu, a ga-ehiwe akwụkwọ mmụta na mahadum mahadum iji kwadokwu onyinye.